Momba anay - Higee Machinary (Shanghai) Co., Ltd.
Izahay dia nanana background tena tsara tamin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpanjifa avy amin'ny firenena isan-karazany amin'ny sehatra maro taona maro ary manome serivisy lava. Mino izahay fa ny fiaraha-miasa tsara ataontsika dia hitondra vokatra miavaka ho anay roa.
Nanamboatra sy nizara orinasa 6 tany Shina izahay. Tongasoa indrindra ireo mpanjifa hifandray aminay. Azo antoka fa hanangana fifandraisana tsara amin'ny mpanjifa izahay amin'ny alàlan'ny serivisy tsara sy ny toetra matihanina.
Ny vokatra faratamponay:
1.Monoblock Water and Beverage Filling Capping Labeling and Packing tsipika feno
2.Linear Liquid Filling Line ho an'ny indostria samihafa
3.M karazana milina fanamarihana rehetra
4. Masinina fonosana (ho an'ny ranoka, vovoka, granule, paty sns.)
Masinina mitsoka 5.Bottle
6.Fitaovana fitsaboana rano
7. Rafitra fitsaboana alohan'ny fitsaboana
8.Ny masinina hafa